Ngikubungaza kanjani okokuzithokozisa ku-inthanethi? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ngikubungaza kanjani okokuzithokozisa ku-inthanethi?
Kunezinyathelo eziningana okuzodingeka uzithathe ngaphambi kokuthumela okokuzithokozisa kwe-inthanethi, okuhlanganisa ukufunda imithetho nezimfuneko zoKokuzithokozisa ze-Airbnb kanye nezimfuneko eziqondene nokokuzithokozisa kwe-inthanethi. Ngaphezu kwalokho, nansi eminye imininingwane okuzodingeka uyazi ngaphambi kokuba uqale ukubungaza.
Ozokudinga ukuze uqalise
Indlela yokusebenzisa i-Zoom
Indlela izivakashi ezibhukha ngayo okokuzithokozisa kwe-inthanethi
Indlela amanani asebenza ngayo
Nansi eminye yemininingwane ebalulekile ozodinga ukuyazi ngaphambi kokuthumela:
Isihloko sokokuzithokozisa kwakho
Incazelo, okuhlanganisa indawo osakaza ukuyo nokuthi yini ekwenza kube okukhethekile
Incazelo yalokho okwenziwayo, okuhlanganisa i-ajenda echazwe ngokucacile
Ukufaneleka, umlando, noma iziqu zakho
Lokho izivakashi okufanele zize nakho
Izithombe zezinga eliphezulu zokokuzithokozisa kwakho, okuhlanganisa nesithombe sakho ukhuluma phambi kwekhamera noma ikhompyutha yakho ukuze ubonise ukuthi okokuzithokozisa kwenzeka ku-inthanethi
Uma usunombono futhi usunale mininingwane, qalisa inqubo yokuthumela.
Khumbula, uzocelwa ukuba uqinisekise ubuwena, ngakho uzodinga isithombe se-ID.
Nakhu okwenzekayo ngemva kokuba usuthumele oKokuzithokozisa kwe-Airbnb ukuba kubuyekezwe.
Okokuzithokozisa kwe-inthanethi kubungazwa ku-Zoom. I-Zoom iyisofthiwe yezinkomfa zevidiyo yenkampane yangaphandle.
Ungadawuniloda i-Zoom lapha.
Ukurekhoda ividiyo yakho
Njengengxenye yenqubo yokuthumela, sikucela ukuba usebenzise i-Zoom ukuze urekhode ividiyo yokokuzithokozisa kwakho. Iziqondiso zokusungula lokho ozokurekhoda zingatholakala lapha.
Noma, ungasebenzisa enye isevisi ukuze urekhode ividiyo yakho, kodwa situsa ngokuqinile ukuba usebenzise i-Zoom, ukuze ujwayelane nokuyisebenzisa.
Ngemva kokuba oKokuzithokozisa Kwe-inthanethi kwakho kugunyaziwe
Uzotshelwa ukuba uvule i-akhawunti entsha ye-Zoom kumasethingi oKokuzithokozisa akho. Lena yi-akhawunti ye-Zoom ehlukile ezolinkwa nokokuzithokozisa kwakho kwe-Airbnb.
Le akhawunti entsha kumelwe isebenzise ikheli le-imeyili elihlukile kunoma iliphi eselikhona le-akhawunti ye-Zoom onayo kakade.
Uzothola i-imeyili ezokubonisa izinyathelo ezimbalwa zokusetha le akhawunti entsha ye-Zoom. Uma usuyiqedile le nqubo, i-akhawunti entsha ye-Zoom izovuleka.
Phawula ukuthi kungathatha imizuzu engu-30 ngemva kokuba usuziqedile zonke izinyathelo ukuba isimo sokusebenza se-Zoom silunge.
Ukuthola ilinki yakho ye-Zoom nephasiwedi
Ungathola ilinki yakho wedwa ye-Zoom yesikhathi ngasinye sokokuzithokozisa kwakho ekhalendeni, ku-imeyili yokuqinisekisa ethunyelwa isikhathi ngasinye lapho isivakashi sibhukha, naku-imeyili eyisikhumbuzo ethunyelwa ngaphambi kokuba okokuzithokozisa kwakho kuqale.
Ukuhlaziya Izinkinga Ze-Zoom
Uma unenkinga ehlobene ne-Zoom, sicela uthintane neqembu labasizi be-Zoom. Ungathola imininingwane naku-Zoom Help Center.
Izivakashi zizobhukha okokuzithokozisa kwakho kwe-inthanethi ku-Airbnb ngendlela efanayo ezibhukha ngayo oKokuzithokozisa kwe-Airbnb okungokoqobo. Ukusebenzisa isici esithi Waiting room ku-Zoom kukuvumela ukuba ulawule ukuthi ubani ojoyina okokuzithokozisa kwakho. Uma isivakashi sabelana ngelinki ye-Zoom nesinye isivakashi ebesingafakiwe ekubhukheni kwaso, akudingeki usimeme ukuba sijoyine.
Kushiyelwa kuwe ukuthi ukhokhisa malini. Sisikisela ukuthi uqale ngenani eliphansi, futhi lapho usuzijwayelanise kahle futhi usuthola nokushiwo ngabanye kwezinkanyezi ezingu-5, ungakhuphula inani olikhokhisayo. Njengasekuzithokoziseni okukuhlanganisa nabantu, i-Airbnb izokhokhisa umbungazi inani lesevisi, ngaphandle uma okokuzithokozisa Kungokokusiza Umphakathi.
Okokuzithokozisa kwe-inthanethi kuvame ukufakwa amanani omuntu ngamunye. Uma ukubhukha kuye kwabhukhelwa isivakashi esisodwa bese ubona ezingu-2, ungazicela ukuba zikhokhele umuntu wesibili kokuthi Isikhungo Sezixazululo. Yize kunjalo, uma ungenankinga ngokuthi izivakashi ezingaphezu kwesisodwa zijoyine ngedivayisi eyodwa, ungazitshela izivakashi encazelweni yakho ukuthi kudingeka zibhukhe isikhala esisodwa kuphela.
Ungasungula nenani leqembu elizimele. Amaqembu azimele avumela izivakashi zibhukhe zonke izikhala kokokuzithokozisa ngosuku nangesikhathi esithile esishiwo nguwe.
Okokuzithokozisa ku-inthanethi kungamaseshini evidiyo anokuphendulana nokubukhoma okulinganiselwe emaqenjini amancane. Kwenza ufinyelele aba…
Imithetho Yokokuzithokozisa Kwe-Airbnb nezimfuneko
Yini okudingeka ngiyazi ngaphambi kokuthi ngibambe iqhaza kokokuzithokozisa ku-inthanethi nge-Zoom?
I-Zoom iyinkundla yasemoyeni yezingqungquthela zamavidiyo eyinkampani eseceleni futhi ungayisebenzisa kumakhompyutha edeskhithophu, kumatheb…